Mariya, Akatsungirira Kushungurudzika | Tevedzera Kutenda Kwavo
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Maya Ndebele Nepali Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
TEVEDZERA KUTENDA KWAVO | MARIYA
MARIYA akagwadama pasi, achirwadziwa zvisingatauriki. Munzeve dzake akanga achiri kunzwa maungira ekuchema kwakaita mwanakomana wake kekupedzisira paakafa pashure pekutambudzika kwemaawa. Kunze kwakanga kwava nerima ari masikati. Nyika yakabva yadengenyeka zvakasimba. (Mateu 27:45, 51) Mariya angangodaro akaona sokuti Jehovha pachake akanga achiita kuti nyika izive kuti akanga arwadziwa nokufa kwaJesu Kristu kupfuura chero ani zvake.
Chiedza chemasikati pachakanga chava kuoneka, rima rakanga rakafukidza nzvimbo yainzi Gorogota kana kuti Nzvimbo yeDehenya parakanga rava kupera, Mariya akachema mwanakomana wake. (Johani 19:17, 25) Anofanira kunge akayeuka zvakawanda. Angangodaro akayeukawo zvimwe zvakanga zvaitika makore 33 akanga apfuura. Iye naJosefa pavakaenda nemucheche wavo kutemberi muJerusarema, mumwe murume akanga akwegura ainzi Simiyoni akafemerwa kuti ataure uprofita. Akafanotaura zvakawanda nezvaJesu, asi akawedzerawo kuti rimwe zuva Mariya aizonzwa sokuti abayiwa nebakatwa refu. (Ruka 2:25-35) Iye zvino, paawa yakaoma kudaro ndipo paakazonyatsonzwisisa zvairehwa nemashoko acho.
Mariya akashungurudzika zvikuru
Zvinonzi pakufirwa kwese kunoita vanhu, rufu runonyanya kurwadza nderwemwana wako. Rufu muvengi akaipa, uye runotirwadzisa tose. (VaRoma 5:12; 1 VaKorinde 15:26) Zvinoita here kuti munhu atsungirire marwadzo akadaro? Sezvatichaongorora upenyu hwaMariya kubvira pakutanga kweushumiri hwaJesu kusvika paakazofa uye pashure pokufa kwake, tichadzidza zvakawanda nezvekutenda kwakabatsira Mariya kutsungirira kushungurudzika.
“ITAI ZVINHU ZVOSE ZVAANOKUUDZAI”
Ngatimbodzokerai shure nemakore matatu nehafu. Mariya akaona kuti zvinhu zvakanga zvava kuda kuchinja. Kunyange mutaundi duku reNazareta, vanhu vakanga vachitaura nezvaJohani Mubhabhatidzi uye nezvemharidzo yake yaikurudzira vanhu kuti vapfidze. Mariya aigona kuona kuti mwanakomana wake wedangwe aiona mashoko acho seairatidza chimwe chinhu; yakanga yava nguva yokuti atange ushumiri hwake. (Mateu 3:1, 13) Kusavapo kwaJesu kwaizoreva kuchinja kwezvakawanda kuna Mariya nemhuri yake. Nei?
Zvinoita sokuti Josefa, murume waMariya akanga atofa. Kana zvirizvo, zvokufirwa zvakanga zvisisiri zvitsva kuna Mariya. * Jesu akanga ava kunzi “mwanakomana womuvezi” kana kuti “muvezi.” Zviri pachena kuti Jesu akanga achipfuudzira bhizimisi rababa vake uye ndiye akanga ava kuriritira mhuri yavo, yaisanganisira vana vatanhatu kana kupfuura vakazoberekwa pashure pake. (Mateu 13:55, 56; Mako 6:3) Kunyange kana dai Jesu akanga achidzidzisa Jakobho uyo angangodaro aitevera Jesu pakuberekwa, kubva kwedangwe kwaizoomera mhuri yacho. Mariya akanga atotakura mutoro unorema kare, saka aiomerwa nokuchinja uku here? Hatizivi. Asi pane mubvunzo unokosha wokuti: Aizoita sei Jesu wekuNazareta paaizova Jesu Kristu, Mesiya akanga apikirwa kwenguva yakareba? Imwe nhoroondo yemuBhaibheri ine zvainotibatsira kuona panyaya yacho.—Johani 2:1-12.
Jesu akaenda kuna Johani kuti anobhabhatidzwa, achibva ava Muzodziwa waMwari kana kuti Mesiya. (Ruka 3:21, 22) Akabva atanga kusarudza vadzidzi vake. Kunyange zvazvo nguva yokuti aite basa rake yakanga yasara shoma, aivawo nenguva yokumbofara nehama neshamwari. Pamwe chete naamai vake, vadzidzi vake, uye vanun’una vake, vakaenda kumabiko emuchato kuKana, taundi ringangodaro raiva pamusoro pegomo, makiromita anenge 13 kubva kuNazareta. Paiitwa mabiko acho, Mariya akaziva nezverimwe dambudziko. Zvimwe akaona vamwe vemhuri yevachati vachizevezerana uye vachitarisana zvinoratidza kuti vainetseka. Waini yakanga yapera! Patsika dzavo, kupererwa newaini zvakadaro kwainyadzisa mhuri yacho uye kwaivhiringidza mabiko acho zvikuru. Mariya akavanzwira tsitsi, uye akabva ataura naJesu.
Akaudza mwanakomana wake kuti, “Havasisina waini.” Aitarisira kuti Jesu aitei? Hatizivi, asi Mariya aiziva kuti mwanakomana wake aiva munhu mukuru aikwanisa kuita mabasa makuru. Zvimwe aitarisira kuti aizotanga ipapo. Aitoita seaiti kwaari, “Mwanangu, ona zvaungaite ndapota!” Mhinduro yaJesu inofanira kunge yakamushamisa. Akati: “Mai kana waini yapera, tinei nazvo?” (Bhaibheri Rinoera) Mashoko aJesu akanga asiri okusaremekedza, kunyange zvazvo vamwe vachifunga kudaro. Asi aitotsiura amai vake zvine unyoro. Jesu akanga achiyeuchidza amai vake kuti vaisava nesimba pamaitiro aaizoita ushumiri hwake, uye kuti izvozvo zvaifanira kungoitwa naBaba vake, Jehovha.
Mariya akabvuma kururamiswa nemwanakomana wake nokuti aiva mudzimai ainzwisisa uye aizvininipisa. Akangoti kune vaipa vanhu zvokudya pamabiko acho: “Itai zvinhu zvose zvaanokuudzai.” Mariya akazviona kuti rakanga risisiri basa rake kutungamirira mwanakomana wake, asi iye nevamwe ndivo vaitofanira kutungamirirwa naJesu. Jesu akaratidza kuti ainzwirawo vachati tsitsi sezvaingoitawo amai vake. Akaita chishamiso chake chokutanga nokuchinja mvura kuti ive waini yakanaka. Zvakaguma nei? “Vadzidzi vake vakatanga kutenda maari.” Mariya akatendawo muna Jesu. Akanga ava kumuona kwete semwanakomana wake chete, asiwo saIshe uye Muponesi wake.
Mazuva ano vabereki vanogona kudzidza zvakawanda pakutenda kwaMariya. Ichokwadi kuti hapana ati amborera mwana akaita saJesu. Asi mwana wese paanova munhu mukuru, kuchinja kwacho kungaoma. Mubereki anogona kuramba achingoona mwanakomana kana mwanasikana wake seachiri kamwana kadiki, kunyange zvazvo maitiro akadaro anenge asisaiti panguva yacho. (1 VaKorinde 13:11) Mubereki angabatsira sei mwana wake akura? Imwe nzira ndeyokuratidza nemwoyo wose kuti anovimba kuti mwanakomana kana kuti mwanasikana akatendeka acharamba achishandisa zvinodzidziswa neBhaibheri obva akomborerwa naJehovha. Kana mubereki akaratidza nokuzvininipisa kuti ane kutenda uye chivimbo, zvichabatsira mwana wake akura. Hapana mubvunzo kuti Jesu aida chaizvo rutsigiro rwaMariya mumakore akatevera aiitika zvakawanda.
“VANUN’UNA VAKE VAKANGA VASINGATENDI MAARI”
Mabhuku eEvhangeri anotiudza zvishoma nezvaMariya pamakore matatu nehafu aiita Jesu ushumiri hwake. Asi yeuka kuti zvimwe akanga ava chirikadzi, achiriritira vana vadiki vakanga vachiri kumba. Zvinonzwisisika kana aisakwanisa kutevera Jesu paaiparidzira munyika yose yokumusha kwake. (1 Timoti 5:8) Asi akaramba achifungisisa zvaakanga adzidza nezvaMesiya uye achipinda misangano musinagogi raiva pedyo nekwaaigara sezvavakanga vagara vachiita semhuri.—Ruka 2:19, 51; 4:16.
Mariya angangodaro aivapowo akagara muvateereri, Jesu paakataura musinagogi kuNazareta. Anofanira kunge akafara kunzwa mwanakomana wake achizivisa kuti uprofita hwakataurwa mazana emakore akanga apfuura hwaitaura nezvaMesiya hwakanga hwazadzika paari! Asi zvinofanira kunge zvakamuodza mwoyo kuona kuti vamwe vanhu vomuNazareta vakanga vasingatendi mumwanakomana wake. Vakatoedza kumuuraya!—Ruka 4:17-30.
Chimwewo chaimuodza mwoyo maonero aiitwa Jesu nevamwe vanakomana vake. Pana Johani 7:5 tinodzidza kuti vanun’una vana vaJesu vaisava nekutenda kwaiva naamai vavo. Panoti: “Vanun’una vake vakanga vasingatendi maari.” Bhaibheri harina zvarinotaura nezvehanzvadzi dzaJesu dzaiva mbiri kana kupfuura. * Chero zvazvingava, Mariya akazoziva kurwadza kwazvinoita kurarama mumhuri inotenda zvakasiyana. Aifanira kurwisa kuti arambe akavimbika kuchokwadi achishanda nesimba kuti abatsire mhuri yake kuti itende muna Jesu, asi asingaiti seari kuvamanikidza.
Pane imwe nguva, boka rehama dzaJesu, dzinofanira kunge dzaisanganisira vanun’una vake dzakafunga zvokuenda kuti “dzinomubata.” Dzaitotaura kuti: “Ava kupenga.” (Mako 3:21, 31) Zviri pachena kuti Mariya aisambofunga zvakadaro, asi akaenda pamwe chete nevanakomana vake, zvimwe aine tariro yokuti vaizodzidza chimwe chinhu chaizovabatsira kuti vave nokutenda. Vane zvavakadzidza here? Kunyange zvazvo Jesu akaramba achiita mabasa anoshamisa uye achidzidzisa chokwadi, vanakomana vaMariya havana kutenda maari. Akanetseka here apererwa kuti chii chaizoita kuti vana vake vachinje maonero avo?
Uri mumhuri ine vanhu vanotenda zvakasiyana here? Unogona kudzidza zvakawanda pakutenda kwaMariya. Haana kukanda mapfumo pasi panyaya yehama dzake dzaisatenda. Asi akasarudza kuita kuti vaone kuti kutenda kwake kwaiita kuti afare uye ave nerugare mupfungwa. Akarambawo achitsigira mwanakomana wake akatendeka. Aisuwa Jesu here? Aimboshuva here kuti dai Jesu aiva kumba pamwe chete nemhuri yake? Kana aimbonzwa saizvozvo, zvinoreva kuti aizvidzora. Aiiona seropafadzo kuti atsigire uye akurudzire Jesu. Unogona kubatsirawo vana vako here kuti vaise Mwari pakutanga muupenyu hwavo?
“BAKATWA REFU RICHABVOORA MWEYA WAKO”
Kutenda kwaMariya muna Jesu kwakakomborerwa here? Jehovha haambotadzi kukomborera vaya vane kutenda, uye ndizvo zvaakaita kuna Mariya. (VaHebheru 11:6) Chimbofungidzira kuti Mariya ainzwa sei paainzwa mwanakomana wake achitaura kana kuti paainzwa vamwe vachitaura nezvemharidzo dzake.
Mienzaniso yakawanda yaJesu inoratidza kudzidziswa kwaakaitwa naJosefa naMariya
Pamienzaniso yaishandiswa nemwanakomana wake, Mariya aiona here zvimwe zvaimuyeuchidza nezvaJesu achiri muduku, paaikura ari muNazareta? Jesu paakataura nezvemukadzi anotsvaira imba yake kuti awane mari yakanga yarasika, anokuya furawa kuti agadzire chingwa, kana kuti anobatidza rambi oriisa pachigadziko, Mariya akafunga here nezvaJesu ari kakomana kaiva padivi pake achiita mabasa iwayo ezuva nezuva? (Ruka 11:33; 15:8, 9; 17:35) Jesu paakataura kuti joko rake nderemutsa uye mutoro wake wakareruka, Mariya akafunga here nezverimwe zuva kare ari masikati, achitarisa Josefa achidzidzisa Jesu muduku kugadzira joko zvakanaka kuitira kuti mhuka izokwanisa kuritakura isingarwadziwi? (Mateu 11:30) Zvechokwadi Mariya aigutsikana zvikuru achifunga nezveropafadzo yaakanga apiwa naJehovha, yokubatsira kurera uye kudzidzisa mwanakomana aizova Mesiya. Anofanira kunge aifara zvikuru kuteerera Jesu, mudzidzisi mukuru kupfuura vamwe vanhu vose, aidzidzisa zvidzidzo zvinokosha achishandisa zvinhu zvinozivikanwa nevanhu vose!
Asi Mariya akaramba achizvininipisa. Mwanakomana wake haana kumboda kuti Mariya apiwe rukudzo, kunyange kunamatwa. Paaiita ushumiri hwake, mumwe mukadzi akashevedzera kuti amai vaJesu vanofanira kunge vaifara zvechokwadi nokuti ndivo vakamubereka. Akapindura kuti: “Aiwa, panzvimbo paizvozvo, vanofara vaya vanonzwa shoko raMwari vachirichengeta!” (Ruka 11:27, 28) Uye mumwe munhu paakaudza Jesu kuti amai vake nevanun’una vake vaiva pedyo, iye akataura kuti vaya vaitenda ndivo vaiva amai nevanun’una vake. Mariya haana kugumburwa nemashoko acho, asi akanzwisisa zvairehwa naJesu kuti ukama hwekunamata hunokosha zvikuru kukunda hweropa.—Mako 3:32-35.
Zvakaoma kutsanangura kurwadziwa kwakaita Mariya paakaona mwanakomana wake achitambudzika kusvika afa padanda. Muapostora Johani uyo akaona zvichiitika akazotaurawo nezvenyaya yacho munhoroondo yake achiti: Paiitika zvose izvi, Mariya akanga akamira “pedyo nedanda rokutambudzikira raJesu.” Hapana chaitadzisa amai vaiva nerudo uye vakatendeka kudaro kuti vamire pedyo nemwanakomana wavo kusvika pakuguma. Jesu akavaona, uye kunyange zvazvo kufema uye kutaura kwaimurwadza zvikuru, akataura. Akaita kuti amai vake vatarisirwe nemuapostora waaida zvikuru, Johani. Sezvo vanun’una vaJesu vaisava vatendi, Jesu haana kuda kuti Mariya atarisirwe navo, asi aida kuti vatarisirwe nemuteveri wake aiva akatendeka. Jesu akaratidza kuti zvinokosha zvikuru kuti murume anotenda atarisire vemhuri yake, kunyanya mune zvokunamata.—Johani 19:25-27.
Jesu paakazofa, Mariya akarwadziwa zvikuru kuita seabayiwa nebakatwa refu, sezvakanga zvafanotaurwa kare. Kana tichiomerwa nokufungidzira kushungurudzika kwaakaita, zvinototiomera zvakanyanya kufungidzira kufara kwaakaita pashure pemazuva matatu! Mariya akanzwa nezvechishamiso chakakura zvikuru kupfuura zvimwe zvose chokuti Jesu akanga amutswa! Uye mufaro wake wakawedzera, nokuti Jesu akazozviratidza kumunun’una wake, Jakobho, uye zviri pachena kuti vaiva voga. (1 VaKorinde 15:7) Kuonana naJesu kwakaita Jakobho kwakamubaya mwoyo uye vamwe vanun’una vake vakabayiwawo mwoyo. Tinoona kuti vakazotanga kutenda kuti Jesu ndiye Kristu. Pasina nguva vakanga vava kupinda misangano yechiKristu naamai vavo ‘vachiramba vachinyengetera.’ (Mabasa 1:14) Vaviri vavo Jakobho naJudha vakazonyora mabhuku emuBhaibheri.
Mariya akafara kuona vamwe vanakomana vake vachiva vaKristu vakatendeka
Tinopedzisira kunzwa nezvaMariya ari pamisangano nevanakomana vake, vachinyengetera. Nhoroondo yake inopera nenzira yakanaka, uye akasiya muenzaniso wakanaka zvikuru! Akatsungirira bakatwa rokushungurudzika pamusana pokutenda kwake, uye akazowana mubayiro unokosha. Kana tikatevedzera muenzaniso wake, nesuwo tichatsungirira chero marwadzo api zvawo enyika ino yakaoma, uye tichawana mibayiro yakakura kupfuura zvatingafungidzira.
^ ndima 8 Josefa anongopedzisira kutaurwa nezvake mumabhuku eEvhangeri pachiitiko chakaitika Jesu aine makore 12. Pashure pacho, amai vaJesu nevamwe vana vavo ndivo chete vanongotaurwa nezvavo asi Josefa haataurwi nezvake. Kamwe chete, Jesu anonzi “mwanakomana waMariya” uye Josefa haataurwi nezvake.—Mako 6:3.
^ ndima 16 Josefa aisava baba vaJesu vokubereka, saka ava vaiva vanun’una uye hanzvadzi nokuna amai.—Mateu 1:20.